devolo WiFi N'èzí: Ihe nkwụnye WiFi maka iji eme ihe n'èzí | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | General, Hardware
Mgbe ihu igwe dị mma, ọtụtụ mmadụ na-anọ n'ogige ha ma ọ bụ na mbara ala ha. A na-egosikwa nke a dị ka ụdị nke ike rụọ ọrụ ma ọ bụ kpọọ n'èzí, n'ụzọ dị jụụ karị. Ọ bụ ezie na nke a na-enwekarị nsogbu na nke ahụ bụ na njikọ WiFi anaghị adịkarị ike, ma ọ bụ ụfọdụ ọ naghị arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'èzí. Ya mere, maka ikpe ndị a, e nwere ihe ngwọta, nke bụ devolo WiFi Outdoor.
devolo WiFi Outdoor bụ ihe nkwụnye WiFi, ezubere iji nye anyị ụlọ nkwụ na ngwa ngwa oge niile. Ọ bụ ihe atụ emere maka naanị n’èzí, nke mere na ọ ga-arụ ọrụ ọbụlagodi na ihu igwe dị njọ. Na-egbochi mmiri ozuzo oge niile, ma ọ bụ unyi na uzuzu.
Ọ dị ka ụdị nke dozie nsogbu njikọ nke na-ebilite mgbe ịchọrọ ịrụ ọrụ ma ọ bụ igwu egwu n'èzí, dị ka teres ma ọ bụ n'ogige. N'ụzọ dị otu a, ekele maka idobe Wilo WiFi N'èzí na oghere a, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ njikọ WiFi dị mma n'oge niile. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ kpọọ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ihe nkwụnye a bụ IP65 kwadoro, nke na-egosi na e mere ya iji nagide ọnọdụ mmiri ozuzo ma ọ bụ ọnọdụ mmiri n'ozuzu ya. O nwere ike idi oke mmiri ozuzo n’enweghị nsogbu ọ bụla. Ya mere, anyị nwere ike idowe ya ebe ọ bụla n'ime ogige na-enweghị nsogbu na nke a.
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo azịza nye ọtụtụ mmadụ. Ebe ọ bụ na ọ ga-enye ha ohere ịrụ ọrụ nke ọma na mbara ala ma ọ bụ n’ogige ha mgbe ọ bụla ha chọrọ, n’enweghị nchegbu ọ bụla. Ọzọkwa, a devolo WiFi N'èzí nwere obere akara ukwu, nke na-eme ka ọ dị mfe itinye ya ebe ọ bụla na ohere ahụ. Nhazi ya dịkwa oke mfe, na-enye ya ohere ịrị elu ma na-agba ọsọ na nkeji ole na ole.
Ndị nwere mmasị na nke a devolo WiFi Outdoor nkwụnye nọ n'ọdịmma. Enwere ike ịzụta ya ugbu a n'ụlọ ahịa na eze. E nwere ya na ụgwọ nke 189,99 euro, dị ka ụlọ ọrụ n'onwe ya kwadoro. Yabụ ọ bụrụ na ị chere na ọ bụ ngwaahịa mmasị, ị nwere ike ime ya ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » devolo WiFi N'èzí: Ihe nkwụnye ahụ ezubere maka iji ya eme ihe n'èzí